Rugby vehivavy – «Can 2019»: nomontsanin’i Afrika atsimo 73 no ho 0 ny Makis | NewsMada
Potipotika, saika tsy nisy nijerena azy ny Makis vehivavy, nanaovan’ny Afrikanina tatsimo azy. Tsy nitraka mihitsy fa tena novizanin-dry zareo tanteraka teo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika “Can 2019”.
Resin’i Afrika atsimo, tamin’ny isa mavesatra, 73 no ho 0 ny Makis vehivavy, teo amin’ny andro faharoa, amin’ny fifanintsanana hiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, taranja rugby lalaovina olona 15 “Can 2019”. Fihaonana, notanterahina omaly talata, tao Johannesburg, afrika atsimo.
Tsy nisotro rano mihitsy ny Malagasy fa nataon’ireo tovovavin’i Afrika atsimo, totoafo. Maty ni-“charge” fotsiny ry Sariaka sy ry Josiane, nandritra ny 80 mn, nilalaovana. Natanjaka ary nanantombo ara-batana, ry zareo mpampiantrano. Vokany, olona telo na efatra no manakana ny lohalaharan’izy ireo. Nisesy ny baolina nentin-tanana nataon’ny Afrikanina tatsimo. Nisy anefa ireo voatsara tao koa ireo tsy maty.
Nahay nameno ny kianja ny mpilalaon’i Afrika Atsimo, hany ka tsy nahita hirika handehanana mihitsy ny “trois quart” sy ny lohalaharana malagasy. Navesatra ihany koa ry zareo, tao anaty “pack d’avant”. Porofon’izany, raha vao “mêlée” ny baolina dia efa atosik’izy ireo fotsiny. Teo am-pialantsasatra dia efa nitarika tamin’ny isa mazava, 44 no ho 0 ny Afrikanina tatsimo.
Na niezaka nanao izay ho afany aza, ry Laurence kapitenin’ny Makis, tsy tafavoaka mihitsy. Tsy tafiditra tao anatin’ny faritry ny 22 m mihitsy ny Malagasy nandritra ny fizaram-potoana voalohany. Efa tany amin’ny fiafaran’ny lalao vao tafaporitsaka tao, saingy tsy nahavita nanindry baolina.
Teo amin’ny lalao ilany, lavon’i Kenya, tamin’ny isa mazava, 37 no ho 5 koa i Oganda. Amin’ny asabotsy 17 aogositra izao, ny lalao farany ka hifandona i Oganda sy i Madagasikara ary i Kenya hifandona amin’i Afrika Atsimo.